Kuwani waa taxanaha lagu bixiyo 2022 Golden Globes | Bezzia
Kuwani waa taxanaha lagu bixiyo 2022 Golden Globes
Maria vazquez | 13/01/2022 12:00 | Wararka
La Daabacaadda 79-aad ee Globes Dahabka, abaal-marinnada Ururka Saxaafadda Dibadda ee Hollywood, ayaa la qabtay 10-kii Janaayo. Ma jirin roog guduudan iyo mid gaalo ah oo la filan karo, waxaana la soo koobay gaarsiinta oo noqotay mid gaar ah oo la akhriyay guuleystaha.
Ka dib eedeymaha musuqmaasuqa iyo kala duwanaansho la'aanta, Golden Globes ayaa si weyn loo qaybiyay iyada oo aan laga fiirsanin inkastoo xaqiiqda ah in saxaafaddu aysan ka labalabeyn inay ku dhawaaqdo guusha. Qaybta Telefishankana waxa ku jiray mid aan laga doodi karin: HBO's 'Guusha'.
3 Wadada tareenka dhulka hoostiisa
Guushu waxay ahayd tan ugu cadcad qaybta telefiishanka oo kamay tegin faro madhan. The riwaayad qoyska hbo Kaliya kuma guuleysan abaalmarinta Golden Globe ee taxanaha riwaayadaha ee sidoo kale laba abaalmarin oo la siiyay jilayaasheeda: Sarah Snook, atariishada taageerada ugu fiican, iyo Jeremy Strong oo ah jilaagii riwaayadaha ugu fiicnaa.
Tixdu waxay ka warramaysaa Dhibaatooyinka qoyska Roy, Logan Roy iyo afartiisa carruur ah. Kan hore waxa uu leeyahay shirkado warbaahineed oo maqal-muuqaal iyo maaweelo ah oo afartiisa carruur ah ay hore ugu riyoon jireen inay dhaxlaan. Sidaa darteed tixdu waxay raad raacdaa noloshooda markay ka fikirayaan waxa mustaqbalka keeni doona mar haddii aabbaha qoyska uu ka tago shirkadda.
Sheekadii Adam McKay Waxa ay ku tartameen qaybteeda 'Pose', 'The Squid Game', 'The Morning Show' iyo 'Lupine', laakiin waxba kama aysan qaban karin taxanahan la isku daray oo xilli ciyaareedkiisa seddexaad, oo ay ka buuxan yaabab iyo saxiixyo cusub, uu uga tagay jilayaasha xaalad aad u cakiran.
Hacks ayaa u adkaaday sida majaajilada ugu fiican sanadka ka hor eexda Ted Lasso. Taxanuhu waxa uu hogaaminayay taxanayaasha ugu fiican sanadka muddo bilo ah,laakin ma aha ilaa December 15 markaasoo Spain aanu fursad u helnay in aanu aragno. HBO Max.
Toban cutub ayaa ka kooban xilliga ugu horreeya ee taxanaha kuwaas oo cutubyadoodu ay yihiin kuwo aan 25 daqiiqo dheerayn. Waxaa curisay Lucia Aniello, taxanaha waxa uu leeyahay jilayaal laba majaajiliiste ayaa loo qoondeeyay inay is fahmaan. Deborah Vance, diva monologue ah oo soo bandhigta bandhig habeen kasta sanadka oo dhan casino Las Vegas, waa dhinac ka mid ah goobta. Ava Daniels, balan qaad da'yar oo kaftan ah oo aragtay shaqadeeda oo la jaray ka dib 'tweet' nasiib darro ah, tan kale.
Iyadoo ay wajaheyso suurtagalnimada joojinta qaar ka mid ah nambaradeeda, Deborah Vance, oo uu ciyaaro Jean Smart, ayaa lagu qasbay inay aqbasho caawinta rookie Ava Daniels, oo ay jileyso Hannah Einbinder. Xiriirka ka dhexeeya Marka hore way adkaan doontaa, laakiin miyay fiicnaan doontaa?
Taxanaha ka bilowday Mareykanka Maajo 13, 2021 wuxuu ku guuleystay seddex abaalmarin abaalmarinadii ugu dambeysay ee Emmy Awards, oo ay hadda ku biirtay Golden Globe ee taxanaha majaajilada ama muusiga ugu wanaagsan. Ma isku dayi doontaa?
Wadada tareenka dhulka hoostiisa
Iyada oo ku saleysan buugga isku-dhafan Waxaa qoray Pulitzer Prize-ku-guulaystayaashii Colson Whitehead oo uu u abuuray shaashadda yar ee Barry Jenkins, oo ah agaasimaha Oscar-ku-guulaystay ee Moonlight, Tareenka dhulka hoostiisa mara waxa uu ku guulaystay wasaaradaha ugu wanagsan ee Golden Globes.
Fiidiyowgan Amazon Prime Miniseries wuxuu ina barayaa Cora (waxaa ciyaaray Soo Mbedu), addoon ka fakaday beertii dalka koonfureed ee uu ku nool yahay oo uu ku socdaalo gobollo kala duwan, taas oo ay ugu wacan tahay waddo tareen oo dhulka hoostiisa ah oo dahsoon. Fikrad ay samaysay Whitehead si ay u qeexdo waddo si fiican u habaysan oo u fududaysay addoommada inay helaan xorriyaddooda.
Waana in bilowgii qarnigii XIX iyadoo la kaashanayo kuwa ka soo horjeeda addoonsiga, a shabakad sir ah si ay gacan uga geystaan ​​hanuuninta addoomada galay gobollada xorta ah ee dalka. Haddaba, intii u dhaxaysay 1810kii iyo 1862kii, shabakaddan "darawal" iyo "mastaradaha saldhigga", dadkii hagayay iyo dadkii guryahoodii ku qariyay baxsadka, siday u kala horreeyaan, waxaa lagu qiyaasay in ilaa 100.000 oo qof la badbaadiyay.
Waxa intaa dheer in si arxan darro ah u soo bandhigay nolosha addoommada ee beeraha, ka go'an in ay xaqiiqada sixirka in la soo bandhigo waxyaabo awood leh oo u oggolaanaya in la isku xidho tagtadii iyo hadda nolosha bulshada madow ee Maraykanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Kuwani waa taxanaha lagu bixiyo 2022 Golden Globes
Dhagaxa cad: Alaabta xiddiga ee gurigaaga
Khiyaamooyinka lagu badbaadiyo guriga oo looga gudbo jiirada Janaayo